Mitolona Hitatitra ny Hetsika Hirak ireo Maraokàna Mpanao Gazety, Na Eo Aza Ny Fandrahonan’ny Fanjakàna · Global Voices teny Malagasy
Mitolona Hitatitra ny Hetsika Hirak ireo Maraokàna Mpanao Gazety, Na Eo Aza Ny Fandrahonan'ny Fanjakàna
Voadika ny 04 Novambra 2017 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, عربي, русский, Italiano, Ελληνικά, English
Mpanao hetsipanoherana tao amin'ny fitorevahana iray tao Imzouren, 14km miala ny tanànan'i Al-Hoceima any amin'ny faritra Rif . Sary an’ AlhoceimasOfficiel. Fampiasàna nahazoana alàlana
Taona iray taorian'ny nanombohan'ireo hetsi-panoherana tany amin'ny tanàna avaratra ao Al Hoceima, mbola miady mafy hatrany ireo media Maraokàna mba ho afaka mitatitra ny vaovao, na misy aza ny fandrahonana sy fampitahoran'ny fanjakàna Maraokàna hitondra azy ireo anoloan'ny lalàna..
Ny 29 Oktobra 2016, taorian'ny fahafatesan'i Mohsin Fekri, mpivarotra trondro, no nanomboka ireo hetsi-panoherana tao amin'ny faritra Rif ao Maraoka. Maty potsitra nohitsahan'ny fiarabe iray mpanangona fako i Fekri raha iny teo ampiezahana nanavotra ny trondrony iny indrindra, izay nogiazan'ireo manampahefana tao an-toerana. Nanomboka teo ireo hetsi-panoherana dia nitombo ho ‘Hirak’ iray na hetsika hitakiana asa sy fandrosoana ara-toekarena, ary hanoherana ny fanilikilihana sy ny kolikoly. Na teo aza ny fandraràna fihetsiketsehana navoakan'ny governemanta, mbola nisy ihany ireo hetsi-panoherana natao nandritra ny faran'ny herinandro mba ho fahatsiarovana ny nahafatesan'i Fekri.
Satria mitohy ny korontana, misedra teritery samihafa ireo mpanao gazety, ahitàna ny fandraràna media, fandroahana sy fandrahonana ho henjehina eny amin'ny fitsaràna.
Omar Radi, Maraokana mpanao gazety miasa tena, izay nandrakotra ireo hetsi-panoherana, no nilaza tamin'ny Global Voices fa rehefa fitaterana ny korontana ara-piarahamonina ao amin'ny faritra Rif no resaka, “misy rivotra mampihorohoro izany”.
“Mety hiafara any am-ponja ireo izay miresaka amin'ny mpanao gazety,” hoy izy. “Matahotra ny hivoaka ny tranony ny olona ary feno polisy eny rehetra eny.”
Amin'izao fotoana izao, fito raha kely indrindra ireo mpiasan'ny media no any am-ponja noho ny nitateran'izy ireo ny hetsipanoherana tany amin'ny faritra Rif.
Ilay mpanao gazety mivantambantam-piteny sady mpanao fandalinana, Hamid Mahdaoui, izay mitantana ilay tranonkala iray tsy miankina “Badil.info”, dia nosamborina tao an-tànanan'i Al Hoceima, toerana nalehany mba hitaterana momba ireo hetsi-panoherana. Ny 20 Jolay 2017, napetraky ny manampahefana ao Maraoka ny lalàna mandràra ny fanaovana fihetsiketsehana. Rehefa nisy mpandalo nahafantatra azy ka nanakana azy ary nanomboka niresaka taminy momba ny Hirak, nokianin'i Mahdaoui ilay fandraràna. Nampangaina izy ary nohelohina ho “miantso” fanaovana hetsi-panoherana.
Tany amin'ny fampakarana didy, nampitomboin'ny fitsaràna iray tamin'ny Septambra lasa teo ho herintaona ny sazy telo volana efa azon'i Mahdaoui, nahatonga azy hanomboka fitokonana tsy hisakafo nandritra ny roa herinandroa.
Ny “Badil.info” izay mandrakotra karazana lohahevitra isankarazany ao Maraoka, isan'izany ny politika, zon'olombelona sy kolikoly, dia isan'ireo tranonkala vitsivitsy tsy miankina afaka mitatitra vaovao momba ireo hetsi-panoherana. Fa tamin'ny 22 Oktobra 2017 teo, nambaran'ireo mpifandrimbona ao fa mety hitsahatra tsy hamoaka intsony ny tranonkala, noho ilay lazain-dry zareo ho antony ara-bola.
Fantatra ihany koa i Mahdaoui amin'ny fivantambantanany miteny manakiana ety anaty aterineto an'ireo manampahefana Maraokàna, izay ao amin'ny Youtube no tena amoahany ny heviny, toerana ifanakalozany hevitra momba ny politika sy ny zon'olombelona ao amin'ilay firenena.
Anaty raharaha iray hafa, nampangaina i Mahdoui ho “tsy nitatitra heloka bevava iray mety hanohintohina ny filaminam-panjakàna” tany amin'ireo manampahefana, vokatry ny resaka iray an-telefaona (izay nahazoana dika ofisialy noho ny fihainoana ny fifandraisany) nifanaovany taminà Maraokàna iray mpikatroka tsy mankasitraka ny fitondràm-panjaka, monina any Pays-Bas, ka tao anatin'izany ilay mpikatroka dia namaritra drafitra iray hampidirana fitaovam-piadiana ho any amin'ny firenena.
Manampy an'i Mahdaoui dia olontsotra enina hafa mpanao gazety izay nosamborina noho ny nandrakofan-dry zareo ny hetsi-panoherana tao Rif no any am-ponja amin'izao fotoana izao . Isan'ireo voasambotra i Mohamed El Asrihi sy Jawad Al Sabiry avy amin'ny Rif24.com, tranonkalan'ireo olontsotra mpanao gazety ao an-toerana izay nanolotra fandrakofana betsana ireo hetsi-panoherana tao Al Hoceima sy tany amin'ireo tanàna hafa.
El Asrihi, toniandahatsoratra sy talen'ny Rif24.com dia nampangaina taminà “fanaovana tsy ara-dalàna ny asa fanaovana gazety” satria tsy manana karatra maha-mpanao gazety. Koa satria tsy nisy fanavaozana intsony ilay tranonkala hatramin'ny tapaky ny Jona, ny pejy Facebook-n'ny Rif 24 manohy manome fandrakofana ny Hirak sy ireo hetsipanoherana.
Na tsy henjana loatra aza no fahitan-dry zareo ny vokany, miantraika amin'ireo mpila ravinahitra avy amin'ny media vahiny ihany koa ilay famoretana. Ny 27 Septambra, nosamborin'ny polisy ilay safiotra Britanika-Iraniana mpanao gazety,Saeed Kamali Dehghan tao Al-Hoceima ary noroahana handao ny firenena tamin'ny filazàna azy ho tsy nanana “fahazoandàlana” hanao tatitra avy any Maraoka. Dehghan dia miasa ho an'ny The Guardian, nisidina ho any amin'ny faritra Rif mba handrakotra ilay hetsi-panoherana sy hitafa amin'ireo mpikatroka tao.
Amin'ny Tondro 2017 an'ny RSF momba ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety Manerantany, faha 133 no laharana misy an'i Maraoka. Nahamarika ilay mpanaramaso ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety Erantany fa mikororosy miandàlana tsy miato ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety” ao amin'ilay firenena izay “ampiasàn'ireo manampahefana ao amin'ny fanjakàna ny tsindry politika sy toekarena mba handemena ireo media tsy miankina ao an-toerana tsy hanao tatitra momba ireo raharaha faran'izay saropady”.
Ny fiafaràn'i Badil sy ny famoretana ireo mpiasa aminà media isankarazany izay nitàna toerana fototra tamin'ny fandrakofana ireo hetsi-panoherana tao amin'ny faritra Rif no nahatonga ireo Maraokàna — ary ireo any ivelan'ny firenena — ho zara raha hanana fitaovana mba haazoana vaovao momba ireo hetsika sosialy.
Tiorkia 24 ora izay